Italia: Mankalaza Ny Faha-2765 Taonany i Rôma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2012 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Rôma, ilay Tanàna Maharitra Mandrakizay, izay lasa tena nisy ny anganongano. Rôma, izay ahitana zava-baovao hatrany hojerena.
Tanàna (tsotra) i Rôma talohan'ny naha-Fiketrahana Masina (Saint-Siège) azy, vao lasa Repoblika ary ampira avy eo. “Tanàna nanana ny lanjany ara-politika, nanankarena, ary lehibe indrindra teo amin'ny tontolo tandrefana” i Rôma nandritra ny ho efa fitonjato taona. Nivelatra hatrany Bretagne ka hatrany amin'ny Saikanosy Arabo, Afrika Avaratra ary Eoropa Atsinanana ny ampira romana teo an-tampon'ny heriny indrindra.
Nankalaza ny faha-2765 taonan'ny tanànany ny Romana tamin'ny 21 Avrily 2012. Nolazain'ny angano fa i Romulus, andriamanitra tapany novelomina amboadia, no nanangana an'i Rôma.
Kolizea ny 21 Avrily 2012 (sarin'ny mpanoratra)
Vohikala Why Rome?, nanazava ny anganonganon'ity lazaina ho Tanàna Maharitra Mandrakizay:
Hankalaza ny tsingerintaona faha-2765 taona nahaterahany i Rôma amin'ny Asabotsy 21 April. (Azonao eriteretina ve hoe teo foana ianao nandritra izany taona maro izany?!) Mifototra amin'ny anganon'ny nanorenan'i Romulus an'i Rôma tamin'ny 753 taona talohan'i Kristy izany. Tsy mbola zatra ilay angano ianao? tahaka izao ny ambangovangony. Kambana i Romulus sy i Remus. Virijiny Mpisoron'i Vesta (andriamanitra italiana) ny reniny ary andriamanitra (Mars, andriamanitry ny ady) kosa ny rainy. Talohan'ny nahaterahan-dry zareo, novonoin'ny rahalahin'ny dadabeny avokoa ny taranaka lahy rehetra. Nilaozana ho faty ny kambana rehefa teraka. Saingy tonga ny amboadiavavy ka nikarakara azy ireo. Nihalehibe ny zaza ka nanana toetra voajanahary ho mpitarika. Nanapa-kevitra ny hanangana tanàna vaovao ry zareo saingy tsy nifanaraka tamin'ny toerana hananganana azy. Nifanditra izy mirahalahy ka maty i Remus tamin'ny farany. Natsangan'i Romulus teo amin'ny tendrombohitra Palatine amin'izay ny tanàna vaovao, ary nomeny anarana hoe … Rôma.
Celebrating Rome, senator-style (author's photo)
Navoitran'i [it] Maria Merola ao amin'ny Satyrnet ny fizotry ny fandaharam-potoana:
Ny fanatanterahana ny Fori Imperiali izay ampiasaina ho ravaka manaingo aorian'ny hetsika mandrafitra an'i Rôma ho tonga amin'ny toerana ahafantarana azy ankehitriny ara-tantara, artistika, ara-kolontsaina no ivon'ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahana. Izany hoe efa nokitihan'i Rôma avokoa hatramin'ny zavakanto taloha indrindra ka hatramin'izao fotoana izao.
Soldiers of Ancient Rome (author's photo)
Nanome [it] antsipirihany bebe kokoa ny fandaharam-potoana ny vohikala Cool Toura , ary manasa ny mpamaky tsy hanadino ny hijery ny rindran-kira:
Aza adinoina amin'ny Asabotsy 21 avrily 2012 hariva ao amin'ny Via dei Fori Imperiali (Tsenan'ny mpanjaka Trajan), manomboka amin'ny 8:30 alina ny fampisehoana “Ny kintan'i Rôma”, hahitana mivantana mpihira sy ny mpitendry mozika…. Manomboka amin'ny 11 alina ka hatramin'ny misasakalina kosa ny fampisehoana maroloko sy ny rindran-kazavàna isan-karazany.
Na dia eo aza ny taonany, malaza any Rôma fa mbola azo iainana tsara ihany ny tanàna:
Eny, efa tena antitra tokoa i Rôma saingy mbola mitana sy tsara endrika hatrany, na dia eo aza ny fanapotehana ataon'ireo olo-pirenena tsy manara-dalàna, mpanao politika sy mpitsidika! Araka ny angano sy ny fomba, ho feno 2765 taona izy amin'ny 21 Avrily ho avy izao. Tsy maninona atao amin'ny 21 avrily satria tsy misy porofo siantifika mazava loatra ahafahana milaza fa naorina tamin'ny 753 talohan'i Kristy ny tanàna. Izany eo ihany, fety mialoha ny androm-panafahana (25 Avrily)/Fetin'ny mpiasa(1 Mey) ho lava kokoa ny faran'ny herinandro hialana voly sy hanala azy ao Rôma. Nikarakara hetsika maro ny vaomieran'ny tanàna. Andao hojerena izay mety ankafizin'ny tsy miteny Italiana.
Navoitran'ny [it] vohikala 06Blog ny anjara toeran'ny toerana tsirairay tahaka ny Capitol, Circus Maximus ary ny Fori Imperiali amin'ireny hetsika ireny:
Hisy ny amboadiavavy, Romulus sy Remus, Julius Caesar, Nero, ny miaramila romana, mbamin'ny tantara sy ny anganon'ny tanàna taloha. Averina ho ankafizina avokoa izany rehetra izany manomboka ny 18 ka hatramin'ny 22 Avrily 2012 miaraka amin'ny famelomana indray ny tantaran'i Circus Maximus, manerana ny lalana Via dei Fori Imperiali sy ny lanonana ankalazaina ao amin'ny Capitol, Roma Caput Mundi – Ny Hira Maharitra Mandrakizay ao amin'ny Auditorium Conciliazione.
Celebration of Rome's anniversary (author's photo)
Ireny toerana ireny no vavolombelon'ny voninahitr'i Rôma Taloha. Ny Circus Maximus, mbola azo idirana na dia mandeha aza ny asam-panavaozana, no toerana nahitana ny fampialana voly isan-karazany nihoatra ny 2500 izao ary mahazaka hatramin'ny mpijery 150 000. Hatramin'izao fotoana izao, io no kianja lehibe indrindra vita tanan'olombelona.
Nampifandray ny tsingerintaonan'i Rôma amin'ny Andron'ny Tany tamin'ny 22 avrily ny mpanao maritrano Tom Rankin ao amin'ny bolongana Sustainable Rome. Nanontany izy:
Raha mora ny mampiaraka ny vakoka ara-kolontsaina miaraka amin'i Roma sy ny fikajiana (fahazaka-mamelona) ny tontolo iainana sy ny Tany, Izaho indray liana amin'ny fananganana tetezana eo amin'ny roa tonta na ao an-toerana na amin'ny ankapobe rehefa hitako fa tsy loharanon'olana momba ny tontolo iainana ankapobe ny tanàna fa vahaolana kosa…. Afa-manao ho fanoitra ny tantarany manankarena hahatsangy no ary (mahazaka tena) ara-toekarena sy ara-tontolo iainana ve i Rôma ? Afaka mampiasa indray ny loharanon-karena nihaniakatra nandritra ny fotoana indray ve izy hialàna amin'ny fandaniana be loatra? Mino aho fa afaka sy mampianatra taranja antsoina hoe Fandrafetana Tanàndehibe mifanaraka amin'ny tontolo iainana mampiasa an'i Rôma ho toeram-panandramana amin'ny lohahevitra tahaka ny fandaniana, angovo, rano, fitaterana ary ny fampiasana ny tany izy.
Soratra miverina: Happy birthday Rome! * 2765 years old | Bilingual News for Students
[…] · Italia: Mankalaza Ny Faha-2765 Taonany i Rôma […]
23 Febroary 2013, 02:11